Omenala Chiclayo | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | America, Ebe njegharị, Peru
N'ime n'ime ngalaba nke Lambayeque anyị nwere ike ịchọta obodo nke Chiclayo, mpaghara mara mma dị n'akụkụ ugwu nke mba Peruvian, a na-achọ ya ma chọọ maka osimiri mara mma ya na ihu igwe dị mma maka ọtụtụ afọ. Ihe dị mma banyere Chiclayo bụ na ewezuga inwe ọmarịcha oke osimiri a, ọ nwekwara ọdịnala pụrụ iche nke mere ka ọ bụrụ ebe kwesịrị ncheta n'ime njem anyị
E wezụga nke ahụ, ka anyị cheta na ọ dịghị ma ọ bụ karịa "Isi Enyi", aha nke amara nke ndị bi na ya.
Ọtụtụ omenala Chiclayo nwere njikọ na akụkọ ntolite ya na okpukperechi ya, N'ihi ya, chọọchị ya na n'ámá ya dị kemgbe narị afọ nke XNUMX abụrụwo ihe dị ezigbo mkpa nye ndị bi na ya. Ya mere, Katidral nke Chiclayo pụtara dị ka ebe ahụ iji chọọ ma nwee ekele maka ntakịrị akụkọ ihe mere eme nke narị afọ abụọ gara aga nke obodo ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị omenala ndị ọzọ, nke metụtara nka, ka anyị hụ ọnụnọ nke paso ịnyịnya na chalanes, ndị nke a bụ ndị na-agba ịnyịnya paso na-egosi ọmarịcha njem ya.
Na Chiclayo, ịgba ọkịrịbụ nwekwara ewu ewu., nke e lebara anya dị ka usoro ntụrụndụ nke dịworo eri ogologo oge. A pụkwara ịkpọ gastronomy nke mpaghara ahụ akụkụ dị mkpa nke amara ya.
Mgbe mmeghe a gasịrị, ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịgagharị na Chiclayo maka ezumike gị ọ bụla ma ọ bụ na ị nwere mmasị n’ebe ahụ, gụọ ka ị mata ya nke ọma.
2 Ghọta na ịkwanyere akụkọ ihe mere eme ha ùgwù
3 Ndị ọzọ na mmemme
3.1 Ndị njem ala nsọ na Cross of Chalpon
3.2 Edisana Cross eke Motupe
Chiclayo bụ obodo nke anọ kachasị na Peru, ọ bụ isi obodo mpaghara Lambayeque nke dị na mbara ala ugwu ugwu Peru. Na 2007 ọnụọgụgụ 524.442 bi na ya, mana nke ahụ na-abawanye kwa afọ. Ha nwere ihu igwe na-acha anwụ anwụ na-ekpo ọkụ, nke nwere oke ikuku na-atọ ụtọ nke na-emetụta mbara ala niile gụnyere oke ugwu na oke osimiri ndị nwere oke ebili mmiri. Ọ bụ ala nke ọdịnala akụkọ mgbe ochie na obodo ndị bara ọgaranya nke gosipụtara na ụlọ ọdịnala ya dị ebube. A maara obodo Chiclayo maka ọmarịcha ụlọ obibi nke colonial, nnukwu nri nri, ọgwụ ndị sitere n'okike ma ọ makwaara nke ọma maka saịtị ochie na nnukwu mkpọmkpọ ebe nke nwere nnukwu mmasị ndị njem.
Ghọta na ịkwanyere akụkọ ihe mere eme ha ùgwù
Ejiri Chiclayo guzobere Chiclayo na 1560 dị ka ime obodo na India. Ruo narị afọ nke 600, ọ bụ obere obodo ma e jiri ya tụnyere obodo Lambayeque dị nso. Kemgbe ahụ, obodo Chiclayo abanyela n'ọtụtụ obodo iji bụrụ nnukwu obodo ukwu ọgbara ọhụrụ. Mpaghara Lambayeque nke Peru, nke Chiclayo dị na ikpere mmiri, kpatara ọdịbendị Mochica dị ukwuu site na XNUMX AD
Akụkọ mgbe ochie nwere na chi bụ Naylamp na-efegharị ya na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya ọtụtụ puku afọ gara aga chọtara alaeze ya. Fọdụ mmepeanya oge ochie hụrụ atụmatụ nke ịchịkwa mpaghara ahụ, n'ihi na ọ bụ ebe dị mkpa na Peru. E nwere ụlọ ọrụ azụmahịa dị n'ebe ugwu nke Peru ebe onye ọ bụla na-aga n'ihi na ọ dị ezigbo mkpa.
Na Chiclayo, dịka ọ dị na Peru, ndị bi na ya nwere nnukwu nkwanye ùgwù na nsọpụrụ maka akụkọ ihe mere eme ha. Nke a pụtara ìhè n’ememe ọdịbendị ndị a na-ahụkarị n’obodo ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na Chiclayo, a na-eme emume "Muchik Identity Week", ọ bụ ememme a na-eme kwa afọ ebe a na-eme ya n'ime izu. Izu a gụnyere ihe omume dị iche iche dịka asọmpi ịma mma maka aha Miss Lambayeque; ngosi na ụlọ akwụkwọ banyere ọrụ ụmụ akwụkwọ, ihe ngosi foto nke mpaghara, wdg. Onyinye nke enyere onyinye kacha mma nke ụlọ akwụkwọ yana maka foto kacha mma. Ndị nnọchi anya mpaghara ga-ekpebi ụbọchị ndị ahụ.
Ndị ọzọ na mmemme
E nwere emume ndị ama ama na obodo Peru na mpaghara Chiclayo ha abụghị otu. Fọdụ ihe dị mkpa ị ga-aga ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga Chiclayo bụ ndị a:
Ndị njem ala nsọ na Cross of Chalpon
Ọ bụ ememme Santísima Cruz de Chalpón na February: (a na-atụle oge okpomọkụ na mpaghara ndịda), nke a na-eme na obodo Chiclayo, ọ na-atọ ọha na eze ụtọ mgbe niile.
Edisana Cross eke Motupe
A na-eme ya kwa afọ na mbido Ọgọstụ n'obodo ndị dị nso dị na Chalpón na Motupe. Ihe omume a na-eme njem njem mmụọ (Santísima Cruz de Motupe) iji kwanyere onye nsọ obodo ahụ ùgwù, kemgbe ahụ ọ ghọkwala mmemme okpukpe kachasị mkpa na mpaghara Lambayeque.
Ememme a na-ewe ọtụtụ ụbọchị. Ka ọnwa nke abụọ dị na Ọgọstụ, onye ụkọchukwu parish ahụ na otu ụmụazụ kwesịrị ntụkwasị obi bidoro njem uka Cerro de Chalpón, nke dị ihe dịka kilomita iri site n’ebe ahụ. Ụbọchị na-esote, Ndị njem ala nsọ na-arịgo ugwu ahụ gaa n'ọgba nke nwere obe obe ma ozugbo ha rutere, ha na-eme emume. Mgbe ahụ, ha ga-ebu obe gbagoo ugwu ahụ nke nta nke nta ha ga-alaghachi na chọọchị dị na Motupe, rute n'August 4 site na obere obodo El El Salitral, El Zapote na Guayaquil. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ọdịnala na ọdịnala nke ọtụtụ ndị bi na ya na-eche ma na-eji ofufe.
Daybọchị ememme a bụ August 5, ebe ha na-eme oku oku ulo na ama ama na ndi otu egwu na-egwu egwu rue ututu. Njem a na-enye ohere dị ukwuu iji hụ ngwakọta nke ọdịbendị ụmụ amaala na nke Ndị Kraịst etinyere n'ememe okpukpe dị n'ógbè ahụ.
O doro anya na Chiclayo bụ ebe ị na-agaghị echefu ma ọ bụrụ na ị ga-eleta Peru. You ga-ahụ ọdịnala ya n'anya, ndị ya, gastronomy ya, ebe mara mma ya, ihe niile o nwere ka ị chọpụta ebe ị ga-eleta na nkà mmụta ihe ochie… ị gaghị echefu ya! N'ezie, echefula igwefoto n'ihi na ị ga-achọ ịnwụ anwụ oge ọ bụla ị ga-ebi na obodo a magburu onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Omenala Chiclayo
Tinye foto ndị ziri ezi, nke mbụ kwekọrọ na Katidral nke Trujillo ma ọ bụghị Chiclayo. N'otu ụzọ ahụ, nke anọ adabaghị n'okporo ámá Chiclayo.
Lelee foto gị nke ọma tupu ịdebe ya ka ị ghara ichegharị onye na-agụ ya
Zaghachi Yuri Castro
You ga-aga na nke ọ bụla n'ime ndị a mọ obodo?
Ihe ndị dị mkpa ịhụ na Porto